Shiinaha ayaa Albaabka Aluminiumka ee Been Abuurtay ee Warshadaynta Baabuurka Ganacsiga iyo Warshadda | Hanvos
Magaca sheyga Xarun casri ah oo casriyeyn ah oo loogu talagalay Audi
Midab Silver, Madow, Matt Black, Madow/Mashiinka wejiga ama dibnaha, Hyper silver, Hyper Black, Sputtering, Chrome ama kuwa kale
Qaabka Baabuurka Loogu talagalay Audi
Tusmada Xidhmada 1 PCS/kartoon
Goobta Asalka Ningbo, Shiinaha (dhul weynaha)
OEM & ODM soo dhawoow
MOQ 25 Dejin
Waqtiga dirida 3-7 maalmood muunadaha, 30-45 maalmood si loo dalbado
KA DIB U JAWAAB
Koox la taliye xirfad leh ayaa ku siineysa adeegyada Q&A ee onlaynka ah. Waxaan tiriney in ka badan 10,000 oo macaamiil iyadoo suuragalnimada in 30 daqiiqo gudahood lagu jawaabo 99.7%.
Inorder macaamiisha si ay u helaan alaabta sidii la filayay, laakiin sidoo kale for our sumcad. waxaan ku dadaali doonaa sida ugu fiican si aan u hubinno gaarsiinta xasiloon iyo dib -u -iibinta oo aan abuurnno hannaan ku -meel -gaar ah oo wax -qabad leh,
KHAYRAADKA CAALAMIGA AH EE QAALIGA AH
Kooxdayadu waxay ku hawlanayd ganacsiga caalamiga ah muddo 8 sano ah waxayna leedahay khibrad aad u badan xagga saadka, gaadiidka iyo ganacsiga, waxayna macaamiisha siin kartaa taageero ganacsi iyo kaalmo.
BAARITAANKA TAYADA OO XOOGAN
Waxaan leenahay kormeerayaal tayo leh oo u xilsaaran kormeerka badeecad kasta oo warshad ah si loo hubiyo in badeecadaha la gaarsiiyay macaamilka ay buuxiyaan shuruudaha tayada iyo tilmaamaha.
Haddii aad qabtid wax su'aalo ah ama aad nooga baahan tahay wax caawimaad ah, fadlan xor u noqo inaad nagala soo xiriirto maareeyaha ganacsiga.
Waxaan isku dayi doonaa sida ugu fiican ee aan uga jawaabi karno su'aalahaaga 24 saac gudahood; dib -u -dhacyada qaarkood ayaa laga yaabaa inay sababaan dhammaadka toddobaadka ama maalmaha ciidaha.
Had iyo jeer Kormeerka kama dambaysta ah kahor shixnadda;
Maxaad nooga iibsaneysaa alaab-qeybiyeyaasha kale?
Waxaan nahay takhasuska ugu fiican dhammaan qeybaha baabuurta ee wax iibsiga. Waxaan leenahay xiriirka ugu fiican dhammaan soosaarka qaybaha baabuurka. Waxaana leenahay dalabka ugu fiican dhammaan qaybaha baabuurka.
Ku saabsan Soo Celinta
Ma aqbalin soo noqoshada badeecadaha iyada oo ku saleysan inaan la kulmin doorbidka qof ahaaneed oo ay ku jiraan, aan ku xaddidnayn, dhawaaqa qiiqa, gariirka, maaddada iyo midabka. Shay kasta oo la rakibay oo la isticmaalay mar dambe uma qalmi doono in lagu soo celiyo duruuf kasta oo jirta.
Qiimaha dhoofintu waxay ahaan doontaa mas'uuliyadda iibsadaha oo si taxaddar leh u samee; ma aqbali karno badeecada waxyeelloobay intii lagu guda jiray hawsha dhoofinta.
Hore: Tayada Sare ee Albaabka Aluminiumka Alwaaxda Albaabada ama Afka
Xiga: Alloy Wheel Rim